တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ - Department of Technology Promotion and Coordination (DTPC)
တရုတ်နိုင်ငံ၊ CRESDA နှင့် မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် တို့အကြား ရည်ရွယ်သည့် စာလွှာကို (၉-၈-၂၀၁၃) ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး စီမံကိန်း ကာလမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ Remote Sensing Satellite Data Sharing and Application Cooperation လုပ်ငန်းစီမံချက်သည် Technical Assistance အကူအညီ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ရရှိပြီးစီမံချက် ငွေပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၀၃၁၂၈) သန်း နှင့်ညီမျှသော Lab ပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ထားပြီး Client terminal hardware and Software များကို တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
Brief Description on collaboration of Department of Technology Promotion and Coordination with China
Letter of Intent (LoI) concerning with the project of Remote Sensing Satellite Data Sharing and Application Cooperation between CRESDA, the Republic of China and Mandalay Technological University, the Republic of the Union of Myanmar was signed in August 9, 2013. This project isakind of Technical Assistance and project duration is from 2013 to 2018. Laboratory Equipments equal with US$0.103128 million have been supported and Client terminal hardware and Software had been set up.
Total Hits : 184843